Maxay ka wada-hadleen Ra’iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka? - Wardeeq 24 TV Maxay ka wada-hadleen Ra’iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka? Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Maxay ka wada-hadleen Ra’iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka?
Maxay ka wada-hadleen Ra’iisul wasaare Rooble iyo beesha caalamka?
Previous articleCiidamo ka tirsan AMISOM oo loo tababaray ilaalinta dadka rayidka ah
Next articleWararkii ugu dambeeyey doorashada HirShabelle ee Golaha Aqalka Sare